Iska Jir Qaxwada: Waa Saaxib Cadow Isku Badali Kara | Xaqiiqonews
Iska Jir Qaxwada: Waa Saaxib Cadow Isku Badali Kara
Qaxwada ayaa qani ku ah maadooyinka lidka ku ah sunta jirka kuwaasi oo u wanaagsan caafimaadka wadnaha, intaasi waxaa u sii dheer faa’idooyin kale oo aad u badan, laakiin qaxwada oo si qaldan loo isticmaalo waxa ay marmarka qaar sabab u noqon kartaa “miisaan koror” dheeri ah.
1- Qaxwada iyo Sokorta
Waa tan khabiirka nafaqada iyo cuntooyinka Lauren Harris-Pincks oo leh “Ururuka Ameerikaanka ee qaabilsan xanuunada wadnaha waxa ay ku taliyaan in hoos loo dhigo isticmaalka sokorta dheeriga taasi oo looga baahan yahay ragga in aysan ka badsan 24 gram dumarkana 36 gram, iyagoo intaa ku daray in qaxwada laga cabo meelaha maqaayadaha ay marmarka qaar ku jiraan 80 gram oo sokor ah.
Sidoo Kale Aqri:Yaa Caafimaadka U Fiican..Qaxwada Mise Shaaha?
2- Qaxwada Oo cunto Laga Dhigto
“Qaxwada ma ahan cunto” ayey tiri Harris-Pincks oo sharaxday in ay Boritiinada, khudaarta cagaaran iyo cuntada dunta leh ay yihiin furaha caafimaadka iyo isku dheeli tirnaanta cuntada, si qofka uusan u dareemin baahi muddo dheeri ah.
cabitaanka koob qaxwo ah oo ay ku jiraan sokor, dufan iyo kalooriyeyaasha, lagama helaayo curiyaasha cuntooyinka ee jirkeen u ooman yahay.
3- Isticmaalka Qaxwada Warshadeysan.
Qaxwada warshadeysan (Kafeyga iwm ), waxaa dhici karta in aad u aragto khiyaar dag dag ah, laakiin ogow cabitaanadan waxa ay qani ku yihiin sokor badan.